को हुन् त पूर्व मन्त्रि बहबहादुरको बिरासत तोड्ने हेमकुमार « Sherpa media Group Nepal
को हुन् त पूर्व मन्त्रि बहबहादुरको बिरासत तोड्ने हेमकुमार
- सोलुखुम्बु, संवाददाता
प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०७४, सोमबार २०:३६
नेपाली काग्रेसका उम्मेरद्वार बलबहादुर केसीलाई फराकिलो मतान्तरले पछि पार्दै बाम गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा माओबादी केन्द्रका हेम कुमार राई (शुरवीर) विजयी भएका छन् । नेपाली काग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्व मन्त्रि बलबहादुर केसीलाई ३ हजार १६७ मतान्तरले पछि पार्दै हेमकुमारले जितेका छन् । हेमकुमारले २० हजार ९१२ मत पाप्त गर्दा उनका निकतम प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कागं्रेसका बलबहादुरले १७ हजार ७४५ मत प्रप्त गरे ।
२०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा बाहेक कहिल्यै पराजय नभोगेका पुर्व मन्त्रि एवम् काग्रेसका केन्द्रिय सदस्य बलबहादुर केसीको विरासत पुर्व जनमुक्ति सेनाका विग्रेड कमाण्डर एवम् माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य हेमकुमार राईले तोडिदिएका छन् ।
काग्रेसले सोलुखुम्बुलाई आफ्नो पडक क्षेत्र मान्छ । तीन पटक समेत मन्त्रि बनेका बलबहादुरलाई पहिलो पटक लोकतात्रिक पद्धतीमा उम्मेदवार बनेका हेमकुमारले फाराकिलो मत अन्तरले जितेका छन् ।
को हुन त पुर्व मन्त्रि बलबहादुरको बिरासत तोड्ने हेमकुमार ?
हेमकुमार राई (सुरवीर)को जन्म २०४० साल पुस १५ गते सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालीका ४ नेचामा भएको हो । बाबा नरध्वज राई र आमा स्व. मुगाधनी राईको कोखबाट कान्छो छोराको रुपमा जन्म लिएका हेमकुमारले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका छन् । नेचाको जालपा प्रावि बाट प्राथमीक शिक्षा, नेचाकै केदार माध्यमीक विद्यालयबाट कक्षा ९ र २०५६ सालमा तत्कालिन सिन्धुली उच्च मावि बाट कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हासिल गरेका हुन् ।
हेमकुमार २०५६ सालबाट तात्कालिन माओवादीको भुमिगत कार्यकर्ता भएर हिडेका थिए । तात्कालिन माओबादीका पुर्वाअन्चल कै एक मात्र सफल ब्रिगेट कमान्डर मानिन्थ्यो । वहाका सहयोद्धा गोम्बु शेर्पा कज्याङले भने, “युदकालिन समय देखीनै बफादार, कर्मनिष्ठ र शहासिक कमाण्डरको रुपमा तत्कालिन हाम्रो पाटीले लिएको थियो ।”
२०५९ सालमा बेथान स्मृति पाँचौं ब्रिगेट कम्पनी सहायक कमाण्डर भएका उनी २०६० सालमा सोही कम्पनीको कम्पनी कमाण्डर भए भने २०६१ सालमा १४औं बटालियन भिसी हुँदै बटालियन कमाण्डरको जिम्मेवारी सम्हाले । २०६२ सालमा सोलुसल्लेरी स्मृति ब्रिगेट भिसी, २०६५ सालमा ब्रिगेट कमाण्डर भएर जनमुक्ति सेनाभित्रको महत्वपूर्ण पदीय हैसियत कायम गर्न सफल भए । २०५८ मा चैनपुर सशत्र बेसक्याम्प आक्रमणको क्रममा पहिलो पटक घाइते भएका उनी २०६९ साल कात्तिकमा रुमजाटार युनिफाइट बेसक्याम्प आक्रमणमा एसल्ट कमाण्डर भएर लड्दैगर्दा गम्भिर घाइते भए । त्यसपछि २०६० सालमा खोटाङ ऐसेलुखर्क भिडन्तमा पुन घाइते भएका उनी बारा जिल्लाको जंगलमा पनि घाइते भएका थिए ।
२०५९ सालमा सगरमाथा ब्युरो सचिवलय सदस्यको जिम्मेवारी लिएका हेमकुमार २०७० साल देखि हाल सम्म पार्टीको जिल्ला ईन्र्चाज संगै पोलिटव्यूरो सदस्यको समेत जिम्मेवारी सह्माल्दै आएका छन् ।
कस्ता थिए हेमकुमारको निकट्तम प्रतिद्धन्द्धि बलबहादुर ?
बि.सं २०१० साल असार १३ गते हाल नेचा सल्यान गाउँपालीका १ सल्यानमा जन्मिएका केसी विद्यार्थी राजनिति देखीनै काग्रेसमा क्रियाशिल छन् । जिल्लाकै जीवन ज्योती मावि नेलेबाट एसएलसी पास गरेका केसीले महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताहचल काठमान्डौ बाट स्नातक तह र किर्तीपुर विश्व विद्यालयबाट स्नात्तकोतर तह उत्र्तीण गरेका छन् । उनको राजनितिक यात्रा विद्यार्थी जीवनबाटै भएको छ । बि.सं २०२७ साल नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्य बनेर राजनितिक यात्रा गरेका केसीलाई २०४८ साल यता निरन्तर पाटीले उम्मेदवार बनाएको छ । सोलुखुम्बुका जनताले केसीलाई बि.सं २०४८, २०५१, २०५६ र २०७० सालको निर्वाचनमा निर्वाचीत बनाएका थिए ।
२०४९ साल देखी हाल सम्म पनि केसी काग्रेसका केन्द्रिय सदस्य हुन् । केसी २०५२ सालमा युवा खेलकुद तथा सस्कृति मन्त्रि, २०५६ मा श्रम तथ रोजगार मन्त्रि, र २०५८ मा पर्यटन मन्त्रि बनिसकेका छन्
source : radiosolu